Jijjiirraa ufmaa kaka'a ala gochuu
Kan armaan gadii akkaataa jijjiirraa ufmaa LibreOffice Calc keessatti kaka'a ala taasistuu fi lamuu kakaastu sitti agarsiisa:
Guutinsa barruu yookiin lakkoofsa ufmaa
Yeroo galfata man'ee keessatti galchitu,LibreOffice Calc ufmaan naqa gitu kan sarjaa sana keessaa argame yaada dhiyeessa. Fankishiniin kun OfmaaNaqaa jedhama.
Geeddarama ofmaa dhangii Guyyaatti
LibreOffice Calc galfatoota muraasa ufmaan gara dhangii guyyaatti jijjiira. Fakkeenyaaf, galfatni 1.1 bara ammee keessatti akka amajjii 1 tti, akkaataa qindaa'inoota gitoo biyyaa sirna dalagaa keetti hiikamuu danda'a, achumaan akkaataa dhangii baraa maadhee irratti raawwateetti mul'ata.
Galfatni akka barruutti hiikamu mirkanneessuuf,jalqaba galfataatti hudhaa dabali.Hudhaan man'ee keessatti hin mul'atu.
Mallattoolee waraabbii mallatoolee waraabbii maamiloon bakkabuufaman
Meeshaalee - Dirqalaalee OfiinSirreessaa filadhu. Gara caancala Waraabbiilee Maamiloo deemiitii Bakkabuusi irraa mallattoo kaasi.
Qabeentaan maa'ee hogayyuu Qubee Guddaan Jalqaba
Meeshaalee - Dirqalaalee OfiinSirreessaa filadhu. Gara caancala Dirqaalaalee deemi. Qubee jalqabaa hima hundaa guddeessi irraa mallattoo kaasi.
Jecha Jecha Biraatiin Bakkabuusi
Meeshaalee - Dirqalaalee OfiinSirreessaa filadhu. Gara caancala Bakkabuusi deemi. Cimdii jechaa filadhuutii Haqi cuqaasi.
Meeshaa - Dirqalaalee OfiinSirreessaa
Title is: Jijjiirraa ufmaa kaka'a ala gochuu